Filoha Ravalomanana Marc : Ny fampihavanana ataon’ny FFKM no tokony handeha alohan’ny fifidianana – MyDago.com aime Madagascar
Niditra mivantana tamin’ny alalan’ny telefaonina teny amin’ny Magro Behoririka ny filoha Ravalomanana Marc ny sabotsy 31 Aogositra 2013. Hafaliana no nandraisan’ny vahoaka mpitolona izany teny an-toerana. Nambarany fa tsy mandry andro aman’alina nandritra iny herinandro iny hoy izy , nanao izay rehetra azo atao amin’ny fanafoanana sy fanakanana io fifidianana izay tadiavin’ny sasany atao io. Ny antony hoy izy dia tsy ara-dalàna sy tsy manaraka ny tondrozotra, satria voalaza ao amin’ny tondrozotra ny hoe fifidianana malalaka, hankatoavin’ny rehetra, tsy misy fanilikilihana, kanefany mifanohitra amin’izany no misy ankehitriny. Azo sary antsaina hoy ny filoha Ravalomanana ny alahelo sy ny hasosorana mahazo ny vahoaka Malagasy, tsy ny eto Antananarivo ihany fa manerana an’i Madagasikara, tsy ny gasy ihany fa ireo fikambanana iraisam-pirenena izay ao anatin’ny manosika sy manery io fifidianana io. Niantso ahy izy ireo nilaza hoe teren’ny sasany ny firenena Malagasy ary tsy misy fanajana hasiny ny maha Malagasy fa ireo vahiny manana tombontsoa vitsy an’isa sy miray tsikombakomba amin’ny mpanongam-panjakana no mamingavinga ny Malagasy manontolo. Ny navaliko hoy ny filoha Ravalomanana dia ny hoe efa tsy misy azonareo atao ve na dia kely akory amin’ny dinika. Misaotra an’Andriamanitra hoy izy fa nihaino ry zareo ka nahemotra ny fanontana ny biletà tokana. Namaly ihany koa izy ireo ka nilaza fa nangataka ny hisian’ny fivorian’ny Gic-M any Addis Abeba. Misy dia misy dia misy hoy izy ny fivoriana ho an’ireo tsy mankasikatra izao zavamisy aimin’ny Alarobia hikerena akaiky ny mahatonga azy ireo manao io. Izao no lazaiko anareo vahoaka Malagasy hoy izy manana harena be tsy toko tsy forohana ny Malagasy. Atao izay hahafahana mihetsika sy maka io harena io, nahita gazy sy petrole ny Mozambikana tany amin’iny lakandranon’I Mozambika iny. Tsy menatra intsony aho hoy izy ny miteny fa tena manararaotra ny fahalemena tsy fisian’ny mpitarika mahomby ianareo. Fantatro fa avo dia avo ny zavatra ataon’izy ireo amin’izao fotoana izao, fa ny manamparitaka ny gaz, sy ny petrole no ataony. Miantso anareo manampahaizana Malagasy, ianareo mafana fo, aho hoy izy vonjeo ny firenentsika, ampio aho. Zavatra roa no tiako horesahana anareo hoy izy . Ny voalohany dia ataony izay ampiadiana antsika Malagasy, ataon’izay ampitahorana, ianareo tsy mahazo mivezivezy etsy sy eroa intsony, efa be ny vola azonareo tamin’ny bois de rose. Matahotra hoy izy dia manaiky lembenana fotsiny. Ny faharoa dia efa misy tetika hafa any ambadika any hoe tsy maintsy ataontsika ny fifidianana dia tsy maintsy miandry dimy taona indray ireo. Mbola averiko ihany hoy izy fa tsy misy firenena iray eto ambonin’ny tany ka hitsabatsabahan’ny firenena vahiny ny fanoloana ny andrimpanjakana, ny fitantanana eto Madagasikara. Amin’izao fotoana izao dia niantso ireo mpisolovava malaza erantany ny tenako, izay nilaza izy ireo fa mbola azo atao ny mijery io haingana io zavatra niseho io. Mila mahavaky fo mihitsy hoy izy ny maheno sy mahita ny zavamisy. Isika eto amin’ny Magro izay mamerina ny ara-dalàna hoy ny filoha Ravalomanana ary mahatsapa fa tena mitongilana ny mpanelanelana, fa izany mpanelanelana izany dia tokony hihaino ny andaniny sy ny ankilany. Tamin’ny Alakamisy teo raha handeha hivory dia hita fa tsy sahy miseho masoandro mihitsy ingahy Chissano, tsy sahy niatrika ahy. Matoa ny olona hoy izy tsy sahy mifanatrika dia misy dikany, tsy izy ihany fa nisy namany koa. Sao ihany fa ireo tao amin’ny fivoriana dia nilaza fa aza maniky lembenana ianao, fa efa niharitra efataona. Nanoratra ny tenako hoy izy ary nanazava tamin’ireo mpitondra ny Troika izay amin’izao fotoana izao dia efa Malawi no filoha ary ny sekretera jeneraly dia Madame Paste Tanzaniana. Tsy hijanonana isika ary tsy hitsahatra mihitsy aho raha mbola izaho koa no izao, fa tsy maintsy hiady hatramin’ny farany isika. Ny zavatra hangatahiko aminareo hoy izy dia aoka ianareo hanaraka tsara ny baiko izay omeko ary aoka hanaraka tsara ny fandaminana izay atao. Efa nolazaiko tamin’ny sommet omaly hoy izy , fa tena misy disadisa, fanaratsiana ary indrindra indrindra tsy fampiseho masoandro ilay izy. Isika izay hoy izy tsy nitsahatra nitondra ny tolona teo anatrehan’Andriamanitra. Amin’ireo mpitondra ireo dia olombelona ihany izy ireo ka tsy tonga lafatra. Mahita aho fa amin’ireo mpitondra ireo dia very hevitra ka vao mahita kely dia miteny amin’ny radio. Tsy maintsy hajaina ny rafim-pikambanana. Nanendry an’I Mamy Rakotoarivelo ny tenako hoy izy ho sefon’ny delegasioana, ary rehefa nanendry azy aho dia nametraka aminy ny fahatokisana, ary rehefa nametraka ny fahatokisana aminy aho nefa tsy atokisan’ny vahoaka, nisy tsy nety ary niarahantsika ny zavanisy. Aleo izahay ihany hoy izy no hiteny azy fa tsy ianareo. Efa niteny mahitsy ny tenako omaly hoy izy ary ho avy aty ry zareo miaraka amin’ny antoko zanak’I Dada. Hanontaniako izy na mbola vonona hanohy na tsy vonana intsony, na hisabaka na tsy hisabaka intsony. Tsy mety hoy izy ny manalabaraka fa manana ny zo amankasiny ny olona ary izaho no nametraka azy , ka noho izany dia tsy maintsy tandrovantsika ny fahefana eo am-pelantanany sy ny zo amankasiny, izay no hahatongavany aty.Tsy hisorona mihitsy aho hoy izy raha tiako ny zanako, fa hilefitra mihitsy aho raha hitako fa misy zavatra tsy mety fa hatramin’izao aloha dia mbola izy no sefon’ny delegasiona. Mandeha ny resaka etsy sy eroa fa hanohana itsy na iroa. Tsy mbola nisy fanapahankevitra hoy izy na hanohana itsy na iroa. Isika rehefa miasa miaraka dia tsy maintsy mifampiera, mifampidinika na izaho ary, fa zavadehibe loatra izany ka tsy fantatra na ho vanona na tsy ho vanona io fifidianana io. Ny tsaho etsy sy eroa dia avelao hijanonana ho tsaho ihany ireny. Ny ezaka ataon’ny FFKM amin’ny fampihavanana hoy izy dia tokony handeha alohan’ny fifidianana. Noho izany isika zanak’I Dada dia tsy maintsy miroso amin’ny fampihavanana na tiana na tsy tiana, ary ho maodely, ho hitan’izao tontolo izao fa voalohany amin’izany ny zanak’I Dada ary tsy misy tonga lafatra akory. Tsy maintsy misy ny firaisankina sy ny fiaraha mientana. Aza matahotra ianareo fa haiko izany “négociation” izany.izany fifampiresahana amin’ny hafa izany. Misy ireo olona mahita volana alohan’ny biby, misy ireo mpanakorontana, kanefa matoky ahy ianareo. Aleo aloha hangina isika hoy izy aleo mifampidinika amin’ny mpitarika, aleo alaina ambony , alaina ambany mba tsy hahatafiditra antsika ao anatin’ny fandriky ny sasany. Tsy misy. Tsy mbola misy mihitsy fanapahankevitra ny hanohana na tsy hanohana, fa raha te hanohana ny sasany dia tohano, fa arakaraky ny toe-draharaha aty alohan’ny handehanako any Addis Abeba. Fantatro hoy izy fa manao izay vitany ireo firenena aty Afrika, fa misy ireo sasany tsy mahalala ny zavatra misy aty Madagasikara. Ianareo mihaino mangina tsara ireo hoy izy ny fifampitokisana no zavadehibe, matoky ahy ianareo fa ny fotoana nijanonana taty izay dia mafy dia mafy. Maro ireo firenena nilaza fa ndao ianao atao prezida ekonomika, fa tsy nanaiky aho. Nytiako ho lazaina aminareo dia efa nilaza aho fa tsy maintsy ataontsika izay hampandroso any Madagasikara. Efa nalefako tany ny vadiko hoy izy ary tsapako fa tena tianareo, nefa nahiliky ny sasany indray izy. Nilaza taminy aho hoe aza kivy ianao fa izay no fijoroana amin’ny fahamarinana ary izay no atao hoe politika.Misaotra an’ Andriamanitra fa nanaiky izy ary nilaza fa miandry ny toromarika manaraka. Ho an’ny mpitarika ireo dia izao no lazaiko azy aty hoe naheno feo aho avy amin’ny vahoaka tamin’ny alalan’ny haino amanjery fa misy ny disadisa sy tsy fitoviam-pijery. Manomboka izao raha mbola te hiaraka amintsika dia aoka hanaraka ny toromarika. Aza mampiseho fihetsika tsy mahomby ianareo fa tsy mety amin’ny movansy antsika. Mivavaha ho azy ireo fa ho avy aty izy ireo amin’ny Talata. Mino ahy ianareo fa tsy maintsy mandresy isika.
6 réflexions sur « Filoha Ravalomanana Marc : Ny fampihavanana ataon’ny FFKM no tokony handeha alohan’ny fifidianana »
Nga mo amin’izao misy zavatra mifanaraka @ tondrozotra intsony fa efa samy manao izay sai-patany jiaby eh… Ka rehefa izany ihany ve tsy aleo lo mba andramana indray io fifidianana io?? Efa im-betsaka koa izay resaka fampihavanana izay fa toa rano atondraka andamosin-gana fotsiny… tsy fantatra hoe tafiditra ao anatin’izany tontolon’ny politika zany ve le mody mba tsy mifanaraka sa tena mafy mihitsy le hoe fihavanana??? mba mila ny hevitrao izay mamaky an’ity soratro ity aho raha azo atao……
Rehefa mba misy ny fampihavanana dia tsy maintsy misy foana ny indro kely ( nivoaka ny efitra ny atsy eh, tsy nety nanao sonia ny ary eh, tsy tonga ny aroa eh…..) tena mampalahelo eh… MBA HO AIZA RE NY IAFARAN’ITY MADAGASIKARA ITY EH…??? mampa-lasa saina ihany hoe mba anahoana ny taranaka any aoriana any…????
Ny tokony ,ny tokony ,ny tokony ….Tsy leader no miteny toa izany Atoa Ravalomanana ,Ny tsy maintsy ,no fiteny raha hitarika tolona .
Ka aiza @ izany isika .
Toa nofinofy no betsaka.
ilay teny « tokony » ê, efa fantatsika loatra: TSY NANDAITRA mihintsy manoloana ny putshistes –
Faut être expéditif …
3 septembre 2013 à 14 h 28 min
Eh! dia mampahonena ireto zanak’i dada rey olona! Miombon’alahelo aminareo aho satria mafy tokoa raha mafy izato manjo anareo!
ny ambanivohitra dit :
18 décembre 2014 à 14 h 48 min
efa ela no namantarana izany resaka petrole zany, dradradradraina foana oe betsaka an’io eto Madagasikara nefa tsy misy na de ezaka kely akory aza atao @ fitrandrahana azy, ny vahiny foana no antsoina hitrangaka azy nefa tsy hitan’ vazan’ainle firenena akory ny %age alaina @le fitrandrahana, mba tsy hilazana oe omena fotsiny ho anze mahavita mitrandraka io
Précédent Article précédent : VEHIVAVY ANKOLAFY RAVALOMANANA : TSY EKENAY NY FITSABAHAN’NY FRANTSAY AMIN’NY RAHARAHAM-PIRENENA
Suivant Article suivant : LERIVA MANAHIRANA : ISIKA TSY MANAIKY NY HITONDRAN’NY MPITONDRA MPANGALATRA